Sirdoonka Puntland iyo Galmudug oo Mar Kale Gacanta ku Dhigay Ina Caloolgeel, Huggaanka Hawlgalada AlShabaab Mudug – Radio Daljir
Luulyo 25, 2017 3:35 b 9
Sida ay Radio Daljir u xaqiijiyeen ilo xogogaal ah ee maamulada Puntland iyo Galmudug, waxaa 2 habeen kahor sirdoonka labada maamul iska kaashadeen hawlgal bilo qaatay, kaas oo muddo ka socday magaalada Gaalkacyo iyo tuulooyinka koonfurta Mudug. Bartilmaadeedka hawlgalka ayaa ahaa 5 ruux oo ah hawlfuliyayaal amniyaatka iyo hawlgalada AlShabaab ee Gobolka Mudug iyo taakuleynta Alshabaabka Buuraha Calmadow.
Isla ilahaas xogogaalka ah ayaa Radio Daljir u xaqiijiyey in Cabdirisaaq Xuseen Tahliil “Ina Caloolgeel ama Ilkacase” uu ku jiro dadka lagu qabtay hawgalka ay iska kaashadeen sirdoonka labada dhinac, ayna fulisay hay’adda PSF Gaalkacyo. Ina Caloolgeel ayaa wararku sheegayaan in uu yahay huggaanka hawlgalada Alshabaab ee magaalada Gaalkacyo iyo nawaaxigeeda.
Waxaa kale oo isla ilahaas xogogaalka ahi Radio Daljir u xaqiijiyeen in Cabdirisaaq Tahliil lala qabtay 3 qof oo kale oo 2 dumar yihiin.
Cabdirisaaq Tahliil (Ina Caloolgeel/Ilkacase) ayaa Dawladda Puntland ugu eedaysnaa in uu masuul ka yahay dilal 25 kor u dhaafay oo laga fuliyey magaalada Gaalkacyo, lalana beedsagay haldoorka bulshada iyo huggaanka dowladda.
8 Nofeember 2012, maamulkii Madaxweyne Faroole waxa uu ku guulaystay in uu Ilkacase/ina Caloolgeel gacanta ku dhigo, markaas oo uu magaalada Gaalkacyo gacanta kula jiray fal argagixiso, watayna baabuur wada qaraxyo iyo jaakadaha ismiidaaminta. Waxaa isla markiiba loo dhaadhicyey xabsiga weyn ee argagixisada ee magaalada Garoowe, bilo kabacdina waxa ay Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ku xaqiijisey danbiyadii uu ku eedaysnaa, waxaana lagu xukumay dil toogasho.
Xukun maxkamadeed oo ah dil toogasho kabacdi, waxaa magaalada Gaalkacyo lagu afduubay 2 arday, waxayna afduubayaasha ardaydu dalbadeen in la soo daayo Cabdirisaaq Tahliil ama ardada la layn doono. Madaxweyne Faroole waxa uu aad uga horyimid si cadna diidmo qayaxan u saaray madaxfurashada Ilkacase. Laakiin hadana Madaxweyne Faroole waxa uu in muddo ah dib-dhigay toogashadiisa.
8 Janaayo 2014, waxaa huggaanka Puntland la wareegay Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas. Hadana sidii Madaxweyne Faroole oo kale Madaxweyne Gaas wuxuu marar badan hakiyey dilka toogasho ee Cabdirisaaq Tahliil. Kudhawaad hal sano kabacdi, cadaadis ugu yimid odayaasha deegaanka Gaalkacyo iyo kuwa labada arday ee afduuban, Madaxweyne Gaas waxa uu 14 Diseenbar 2014, cafis u fidiyey Cabdirisaaq Xuseen Tahliil, loo yaqaan Ina Caloolgeel ama Ilkacase, oo markaas 24 bilood ama 2 sano xabsiga Garoowe ku ahaa toogasho suge xukunka Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Puntland.
15 Diseenber 2014 Cabdirisaaq Xuseen Tahliil, Ina Caloolgeel (Ilkacase) ahna huggaanka hawlgalada iyo loojistikada Alshabaab Puntland iyo Gobolada Dhexe asaga oo haysta Cafis Madaxweyne Puntland waxaa laga siidaayey xabsiga argagixisada ee Garoowe, waxa uuna isla 15 Diseenbar si xor ah ku yimid, kuna dhexmaray magaalada Gaalkacyo.
21 Agoosto 2016, waxaa laba qarax oo waaweyn oo ismiidaamin ah lala beegtay xaruntii Dawladda Hoose ee Gaalkacyo iyo Cisbitaalka Guud ee Gaalkacyo. Qaraxaas waxa uu dhulka dhigay dhismayaashii dawladda oo cisbitaalku ku jiro, waxaana ku naf waayey dad 40 kor u dhaafay, dhaawucuna wuxuu ahaa kontomeeye.
28 Siteenbar 2016, ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee PSF Gaalkacyo oo kaashanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka waxay ka hortageen weerar iyo abaabul qarax oo laga waday duleedka koonfur Bari ee Gaalkacyo, meel u dhow deegaanka Jeexdin. Abaabulka weerarkaas dhicisoobay waxa ay ilo xogogaal ah sheegeen in ay lahaayeen Cabdirisaaq Tahliil (Ina Caloolgeel/Ilkacase) iyo Nuur Deeq Cabdullahi Maxamed Diini Maalinguur, waxaana ku basbeelay badanaa agabkii iyo dadkii hawlgalka argagaxa ah waday. Waqtigaas waxaa la soo wariyey in Cabdirisaaq Tahliil ku jiray rag ku dhaawacmay duqeynta PSF iyo Maraykanka oo iskaashanaya.
Sidii Cabdirisaaq Tahliil (Ina Caloolgeel/Ilkacase) looga siidaayey xabsiga weyn ee Garoowe waxaa bartii ka sii socda dilalka abaabulan ee lala beegsado haldoorka bulshada Gaalkacyo iyo masuuliyiinta Dowladda Puntland.
Sooqabashadii labaad ee uu mar kale soo galo gacanta Dowladda Puntland, dawladdu illaa iyo hadda kama aysan hadal sooqabashada iyo xarigga Cabdirisaaq Tahliil.
Anwar Barre 4 years ago
hadduu alshabaab yahay alla haga qabto haddii uusan ahaayna alla hasoo badbaadiyo
Fadeexad:Nabadoon Cali Aloore Oo Taageeray Kooxihii Dadqalatada Ee Gaalkacyo Dadka Ku Laynjiray (Dhegeysi Iyo Qoraal Gaaban) | Puntland Observer 4 years ago
[…] Waxaana dhacday ninkii daraad laga soo qabtay xaafadda Baraxlay Cabdirisaaq Tahaliil ina calool geel oo ay soo qabteen ciidamo iskaashaday PSF qaybta Galmudug, Qaybta Puntland iyo Maraykanka oo taageerayay in uu ahaa nin waligiiba shaqada ka waday xaafadda baraxlay akhri warbixintaas oo dhamaystiran […]
Cabdi Casiis Cabdulaahi Tawakal 4 years ago
Been ayaad sheegteen ninkaan butland uasiideyso ayada iyo gaaladaba hadiikale galmudug tilaabo kuhaboon ayey qaadee
Farxiyo Mohamed 4 years ago
Nasifo Khaliif 4 years ago
Subxaanalaha maailaahey lagacabsado maxaaloonabayaaa dadka shacabka ah miyaanan ladhibanayn mise wuxuusan aheyn maxaa luugu dhajinayaaa muwaandinkaan soomaliyeed wax uusan ahayn lkn waxkasta alla ayaakawayn
Dadkaaga Dhinac Ka Raac 4 years ago
Waleee gaalkacyo way dhali doontaaaa markuu dagaal dhaco maraykana isha ka daawado markaas aan is waraysanaynaaa majeerteenow inta ka horaysa waxaa rabtiin iska qora
Sharmarke Mullaax 4 years ago
caruurti gurysha xaraanta ah haystey isbaaradana laga quudin jiray bal weynu aragna ninka kaaga qas weyn oo ku tura wax madaxa laga qaraaca istaahisha
Nihaal Puntlànďer INa Geswalac 4 years ago
majerten wxik runuu shegay wx waxay yihiin an la aqn qaab iyo dhaqan islamna katagay kuwasa wx sheg ubahan ee mahn majerten ina wx ushegtid
Ninkaan in lasiidaayo awalba madex weyne gaas dhagool baa ku deg degey waayo intuu xirnaa magaalada galkacyo oo gaa amaana laga dareemaayey marka waa in qoorta laga jaraa waa jumrim ummad somaliyeed ee islaamka ah gumaadey